Ndị Ikpe 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Ikpe 6:1-40
6 Ụmụ Izrel wee malite ime ihe jọrọ njọ n’anya Jehova.+ Jehova wee nyefee ha n’aka Midian+ ruo afọ asaa. 2 Midian wee merie Izrel.+ N’ihi Midian, ụmụ Izrel meere onwe ha ebe a na-akwakọba ihe n’okpuru ala, n’ugwu, meekwa ọgba na ebe ndị siri ike mbanye.+ 3 O wee ruo na, ọ bụrụ na Izrel aghaa mkpụrụ,+ ndị Midian na ndị Amalek+ na ndị si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ+ na-agbagote, ee, ha na-agbagote buso ha agha. 4 Ha na-amakwa ụlọikwuu wee buso ha agha, bibiekwa mkpụrụ nke ala ha ruo Geza, ha anaghịkwa ekwe ka ihe oriri ọ bụla ma ọ bụ atụrụ ma ọ bụ ehi ma ọ bụ ịnyịnya ibu fọdụ n’Izrel.+ 5 N’ihi na ha na-achịrị anụ ụlọ ha, burukwa ụlọikwuu ha gbagote. Ha na-abịa n’ìgwè dị ka igurube,+ ha na kamel ha enweghị ngụta;+ ha na-abatakwa n’ala ahụ iji bibie ya.+ 6 Izrel wee daa ogbenye nke ukwuu n’ihi Midian; ụmụ Izrel wee malite ịkpọku Jehova ka o nyere ha aka.+ 7 O wee ruo na n’ihi na ụmụ Izrel kpọkuru Jehova ka o nyere ha aka n’ihi Midian,+ 8 Jehova zigaara ụmụ Izrel otu nwoke, bụ́ onye amụma,+ wee sị ha: “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, ‘Ọ bụ m kpọpụtara unu n’Ijipt,+ wee kpọpụta unu n’ụlọ ndị ohu.+ 9 M wee napụta unu n’aka Ijipt nakwa n’aka ndị niile na-emegbu unu, chụpụkwa ha n’ebe unu nọ ma nye unu ala ha.+ 10 M gwakwara unu, sị: “Abụ m Jehova Chineke unu.+ Unu atụla chi ndị Amọraịt+ unu bi n’ala ha egwu.”+ Ma unu egeghị ntị n’olu m.’”+ 11 E mesịa, mmụọ ozi Jehova bịara+ nọdụ ọdụ n’okpuru nnukwu osisi dị n’Ọfra, bụ́ nke Joash onye Abi-iza,+ mgbe Gidiọn+ nwa ya nọ na-eticha ọka wit n’ebe nzọchapụta mmanya iji bupụ ya ngwa ngwa ka ndị Midian ghara ịhụ ya. 12 Mmụọ ozi Jehova wee pụta ìhè n’ihu ya, sị ya: “Jehova nọnyeere gị,+ gị nwoke dị ike, nke bụkwa dike.” 13 Gidiọn wee sị ya: “Biko, onyenwe m, ọ bụrụ na Jehova nọnyeere anyị, gịnịzi mere ihe ndị a niile ji na-adakwasị anyị,+ olee ọrụ ebube ya niile+ nna anyị hà kọọrọ anyị,+ sị, ‘Ọ́ bụghị n’Ijipt ka Jehova si kpọpụta anyị?’+ Ma ugbu a, Jehova agbahapụwo anyị,+ ọ na-enyefekwa anyị n’ọbụ aka Midian.” 14 Jehova wee chee ya ihu, sị ya: “Were ike a i nwere gaa,+ ị ga-azọpụtakwa Izrel n’ọbụ aka Midian.+ Ọ́ bụghị m na-eziga gị?”+ 15 O wee sị ya: “Biko, Jehova. Gịnị ka m ga-eji zọpụta Izrel?+ Lee! Ọ bụ ezinụlọ* m si pụta kacha nta na Manase, ọ bụkwa m kacha nta n’ụlọ nna m.”+ 16 Ma Jehova sịrị ya: “N’ihi na m ga-anọnyere gị,+ ị ga-emerikwa ndị Midian+ dị ka à ga-asị na ha bụ otu onye.” 17 O wee sị ya: “Ugbu a, ọ bụrụ na ihe m dị gị mma,+ meekwara m ihe ịrịba ama iji gosi na ọ bụ gị na-agwa m okwu.+ 18 Biko, esila n’ebe a pụọ ruo mgbe m bịakwutere gị+ ma weta onyinye m debe n’ihu gị.”+ O wee sị ya: “Mụ onwe m ga-anọdụ ala n’ebe a ruo mgbe ị ga-alọghachi.” 19 Gidiọn wee banye n’ụlọ, sie nwa ewu,+ werekwa otu ihe ọ̀tụ̀tụ̀ efa ntụ ọka* mee achịcha na-ekoghị eko.+ O tinyere anụ ahụ na nkata, kunyekwa ofe n’ite e ji esi nri, o wee buru ha bupụtara ya n’okpuru nnukwu osisi ahụ ma busa ha n’ihu ya. 20 Mmụọ ozi nke ezi Chineke wee sị ya: “Buru anụ ahụ na achịcha ahụ na-ekoghị eko dọkwasị n’elu nnukwu nkume a dị n’ebe a,+ wụpụkwa ofe ahụ.” O wee mee otú ahụ. 21 Mmụọ ozi Jehova wee setịa ọnụ mkpara o ji n’aka metụ anụ ahụ na achịcha ahụ na-ekoghị eko, ọkụ wee si n’oké nkume ahụ pụta rechapụ anụ ahụ na achịcha ahụ na-ekoghị eko.+ Ma mmụọ ozi Jehova pụrụ, ọ hụghịkwa ya ọzọ. 22 Gidiọn wee mata na ọ bụ mmụọ ozi Jehova.+ Ozugbo ahụ, Gidiọn sịrị: “Ewoo, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova, ahụwo m mmụọ ozi Jehova ihu na ihu!”+ 23 Ma Jehova sịrị ya: “Udo dịrị gị.+ Atụla egwu.+ Ị gaghị anwụ.”+ 24 Gidiọn wee wuoro Jehova ebe ịchụàjà+ n’ebe ahụ, e wee na-akpọ+ ya Jehova-shelọm ruo taa. Ọ ka dị n’Ọfra+ nke ndị Abi-iza. 25 O wee ruo n’abalị ahụ na Jehova gara n’ihu ịsị ya: “Were nwa oké ehi, bụ́ nwa oké ehi nna gị, ya bụ, nwa oké ehi nke abụọ dị afọ asaa, kwatuokwa ebe ịchụàjà Bel+ nke nna gị, gbutuokwa ogwe osisi dị nsọ nke dị ya n’akụkụ.+ 26 Were nkume ị ga-edo n’ahịrị n’ahịrị wuoro Jehova Chineke gị ebe ịchụàjà n’isi ebe a e wusiri ike, werekwa nwa oké ehi nke abụọ ahụ chụọ àjà nsure ọkụ n’elu nkụ si n’ogwe osisi ahụ dị nsọ nke ị ga-egbutu.” 27 Gidiọn wee kpọrọ mmadụ iri n’ime ndị ikom na-ejere ya ozi wee mee dị nnọọ ka Jehova gwara ya;+ ma o ruru na ebe ọ bụ na ọ tụrụ ezinụlọ nna ya na ndị obodo ahụ egwu nke ukwuu ime ihe ahụ n’ehihie, o mere ya n’abalị.+ 28 Mgbe ndị obodo ahụ biliri n’isi ụtụtụ otú ha na-eme, lee! a kwatuwo ebe ịchụàjà Bel, e gbutuwokwa ogwe osisi dị nsọ+ nke dị n’akụkụ ya, chụọkwa nwa oké ehi nke abụọ n’àjà n’ebe ịchụàjà ahụ e wuru. 29 Ha wee malite ịsị ibe ha: “Ònye mere ihe a?” Ha wee jụwa ase, meekwa nchọpụta. N’ikpeazụ, ha sịrị: “Ọ bụ Gidiọn nwa Joash mere ihe a.” 30 Ya mere, ndị obodo ahụ gwara Joash, sị: “Kpọpụta nwa gị ka e gbuo ya,+ n’ihi na ọ kwaturu ebe ịchụàjà Bel, nakwa n’ihi na o gbuturu ogwe osisi dị nsọ nke dị n’akụkụ ya.” 31 Joash+ wee gwa ndị ahụ niile na-emegide ya,+ sị: “Ọ̀ bụ unu ka ọ dịịrị ikpechitere Bel ọnụ ya iji hụ ma ùnu ga-azọpụta ya? E kwesịrị igbu onye ọ bụla kpechitere ọnụ ya, ọbụna n’ụtụtụ a.+ Ọ bụrụ na ọ bụ Chineke,+ ya kpere ọnụ ya,+ n’ihi na mmadụ akwatuwo ebe ịchụàjà ya.” 32 O wee malite ịkpọ ya Jerọbel+ n’ụbọchị ahụ, sị: “Ka Bel kpere ọnụ ya, n’ihi na mmadụ akwatuwo ebe ịchụàjà ya.”+ 33 Ndị Midian+ na ndị Amalek+ niile na ndị si n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ+ zukọtara dị ka otu ndị+ wee gafee maa ụlọikwuu na ndagwurugwu Jezril.+ 34 Mmụọ Jehova+ wee kpuchie Gidiọn, o wee fụọ opi,+ e wee kpọkọta ndị Abi-iza+ ka ha soro ya. 35 O wee zipụ ndị ozi+ ka ha gazuo Manase, a kpọkọtakwara ha ka ha soro ya. O zipụkwara ndị ozi ka ha gazuo Asha na Zebulọn na Naftalaị, ha wee gbagote izute ya. 36 Gidiọn wee gwa ezi Chineke, sị: “Ọ bụrụ na ị ga-esi n’aka m zọpụta Izrel, dị ka i kwere ná nkwa,+ 37 lee, m na-ewepụta ajị anụ n’èzí n’ebe nzọcha mkpụrụ. Ọ bụrụ na igirigi adaa naanị n’ajị anụ a ma ala dum adị kọrọ kọrọ, mgbe ahụ m ga-amara na ị ga-esite n’aka m zọpụta Izrel, dị ka i kwere ná nkwa.” 38 O wee dị otú ahụ. Mgbe o biliri n’isi ụtụtụ echi ya gaa pịa ajị anụ ahụ aka, ọ pịpụtara mmiri ga-eju otu nnukwu ite n’ajị anụ ahụ. 39 Otú ọ dị, Gidiọn gwara ezi Chineke, sị: “Ewesola m iwe dị ọkụ, kama ka m kwuo okwu naanị otu ugboro ọzọ. Biko, ka m jiri ajị anụ a nwaleekwa naanị otu ugboro ọzọ. Biko, ka ọ bụrụ naanị ajị anụ a ga-adị kọrọ kọrọ, ka igirigi daa n’elu ala dum.” 40 Chineke wee mee otú ahụ n’abalị ahụ; o wee bụrụ naanị ajị anụ ahụ dị kọrọ kọrọ, ma igirigi dara n’elu ala ahụ dum.
^ Otú e si dee ya n’asụsụ Hibru bụ “otu puku nke m si pụta.”
Ndị Ikpe 6